Dr. Tint Swe's Writings: Historical rankings of presidents of the United States အမေရိကန်သမတများ၏ သမိုင်းအဆင့်
Historical rankings of presidents of the United States အမေရိကန်သမတများ၏ သမိုင်းအဆင့်
၁။ ဉာဏ်ဘယ်လိုစစ်ရမှာလဲ့ ဉာဏ်ရည်စစ်တာက စက်နဲ့လား၊ ဒါမှမဟုတ် သင်္ချာနည်းနဲ့လား။
IQ tests အိုင်ကျူတက်စ် ဆိုတာ စာမေးပွဲမေးခွန်းတွေပေးစစ်သလို စစ်တယ်။ ကာလတိုမှတ်ဉာဏ်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်း၊ သင်္ချာဉာဏ်စွမ်း၊ မှတ်သားနိုင်စွမ်း စတာတွေပါတယ်။ လူဦးရေ ၂% မှာ အိုင်ကျူ ၁၂၈ ထက် ပိုရကြတယ်။
၂။ အင်္ဂလိပ်လိုမေးပါတယ်။ IQ နဲ့ EQ စစ်ဆေးနည်းတွေကို ယုံပါသလားတဲ့။ သူ့အနေနဲ့ စိတ်ရှုတ်တာ ရှိလို့ပါ။ အမှတ် အဆင့်များတဲ့သူတိုင်းက လူထုအကျိုးကို များများစားစားလုပ်ကြတယ်လို့ မထင်လို့ပါတဲ့။ တချို့ဆိုရင် အိုင်ကျူနည်းပြီး အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်တဲ့။
ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ ချက်ချင်းဝင်လာတာကတော့ လင်ကန်း (လင်ကွန်းလို့ အသံမထွက်ပါ)။ ကျွန်တော် စာနဲ့ရေးတာလည်း အတိအကျ မဟုတ်သေးပါ။ ဆောရီး။
U.S. Presidents Ranked By IQ အမေရိကန်သမတ (၂၄) ဦးတို့ရဲ့ IQ ဆန်းစစ်ချက်ကို ရေးတင်ထားတယ်။ အဲဒီ ၂၄ ဦး ထဲမှာ လင်ကန်း မပါ။ ကျွန်တော်က သူလုပ်ဆောင်ခဲ့တာ အကျိုးကျေးဇူးအကြီးမားဆုံးလို့ ထင်တယ်။ ကျွန်စံနစ်ဖျက်သူ။
၁၉၂၀ ခုနှစ်က Mount Rushmore မောင့်ရာ့ရ်ှမိုးမှာ ထုလုပ်တဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးသမတလေးဦးက ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်၊ သောမတ်စ်ဂျက်ဖါဆန်၊ သီယိုဒိုရုဏ်ဗဲ့နဲ့ အေဗရာဟန်လင်ကန်း။
Historical rankings of presidents of the United States အမေရိကန်သမတများ၏ သမိုင်းအဆင့်လို့ ရှိတယ်။ အမေရိကန်ဆန်းစစ်မှုကို ကိုးကားလို့ တမျိုးမထင်စေလိုပါ။ ဂူဂယ်လ်မှာရှာရတာလည်း လွယ်တယ်။ သုတေသနတွေ နယ်ပယ်တိုင်းမှာ နေ့တိုင်းလုပ်ကြလို့။ ရလဒ်မတူတာတွေရှိတယ်။
Rasmussen poll ခေါ် မဲစံနစ်နဲ့ရွေးခြင်း ၂၀၀၇
President Favorable Unfavorable Net favorable
1. George Washington 94292
2. Abraham Lincoln 92488
3. Thomas Jefferson 89485
4. Theodore Roosevelt 84 8 76
5. Franklin D. Roosevelt 81 12 69
6. John F. Kennedy 80 13 67
7. John Adams 74965
8. James Madison 73 8 65
9. Ronald Reagan 72 22 50
10. Dwight D. Eisenhower 72 15 57
Gallup poll ခေါ် မဲစံနစ်နဲ့ရွေးခြင်း ၂၀၁၁
1. Ronald Reagan (19%)
2. Abraham Lincoln (14%)
3. Bill Clinton (13%)
4. John F. Kennedy (11%)
5. George Washington (10%)
6. Franklin Roosevelt (8%)
7. Barack Obama (5%)
8. Theodore Roosevelt (3%)
9. Harry Truman (3%)
10. George W. Bush (2%)
1. John F. Kennedy (85% approval/10% disapproval)
2. Ronald Reagan (74% approval/24% disapproval)
3. Bill Clinton (69% approval/30% disapproval)
4. George H. W. Bush (64% approval/34% disapproval)
5. Gerald Ford (61% approval/26% disapproval)
6. Jimmy Carter (52% approval/42% disapproval)
7. Lyndon B. Johnson (49% approval/36% disapproval)
8. George W. Bush (47% approval/51% disapproval)
9. Richard Nixon (29% approval/65% disapproval)
1. John F. Kennedy (74% favorability/15% unfavorability)
2. Ronald Reagan (60% favorability/30% unfavorability)
3. Bill Clinton (62% favorability/34% unfavorability)
4. George H. W. Bush (53% favorability/35% unfavorability)
5. Gerald Ford (45% favorability/26% unfavorability)
6. Jimmy Carter (45% favorability/43% unfavorability)
7. Lyndon B. Johnson (36% favorability/39% unfavorability)
8. George W. Bush (41% favorability/51% unfavorability)
9. Richard Nixon (19% favorability/62% unfavorability)
1. John F. Kennedy (80% approval/6% disapproval)
2. Ronald Reagan (72% approval/16% disapproval)
3. Bill Clinton (65% approval/24% disapproval)
4. Dwight D. Eisenhower (61% approval/6% disapproval)
5. Harry S. Truman (57% approval/7% disapproval)
6. Jimmy Carter (47% approval/28% disapproval)
7. George H. W. Bush (44% approval/38% disapproval)
8. Barack Obama (41% approval/33% disapproval)
9. Gerald Ford (37% approval/25% disapproval)
10. Lyndon B. Johnson (33% approval/27% disapproval)
2013 Gallup poll November 7–10, 2013
1. Dwight D. Eisenhower 10% 39% 36% 2% 1% 12% 3.63
2. John F. Kennedy 18% 56% 19% 2% 1% 4% 3.92
3. Lyndon B. Johnson 4% 16% 46% 14% 8% 12% 2.93
4. Richard Nixon 2% 13% 27% 29% 23% 6% 2.38
5. Gerald Ford 2% 14% 56% 15% 5% 8% 2.92
6. Jimmy Carter 4% 19% 37% 20% 15% 6% 2.76
7. Ronald Reagan 19% 42% 27% 6% 4% 2% 3.67
8. George H. W. Bush 3% 24% 48% 12% 10% 2% 2.98
9. Bill Clinton 11% 44% 29% 9% 6% 1% 3.45
10. George W. Bush 3% 18% 36% 20% 23% 1% 2.58
11. Barack Obama 6% 22% 31% 18% 22% 1% 2.72
Memorability of the Presidents November 2014
1. Barack Obama (100%)
2. Bill Clinton (96%)
3. George W. Bush or George H. W. Bush (95%)
4. George Washington (94%)
5. Abraham Lincoln (88%)
6. John F. Kennedy (83%)
7. Richard Nixon (82%)
8. Jimmy Carter (79%)
9. Thomas Jefferson (72%)
10. Ronald Reagan (66%)
Notable scholar surveys မှာ ကျွန်တော်ထင်တဲ့ လင်ကန်းကို ရွေးထားတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကိုလည်း ရပ်စဲနိုင်ခဲ့သူ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ လင်ကန်း ပေါ်စေချင်တယ်။ James Buchanan ကို အညံ့ဆုံးလို့ ရွေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီ ဘယ်သူ့ကို ရွေးကြမလဲ။ ရွေးစရာ များလွန်းတယ်။
သုတေသနဆန်းစစ်မှုဆိုတာ ကျယ်ပြန့်လေ အမှန်နဲ့နီးစပ်လေ။ ဆန်းစစ်မှုလုပ်သူရော မေးမြန်းခြင်းခံရသူတွေကပါ အရည်အချင်းရှိလေလေ အမှန်နဲ့နီးစပ်လေ။ ပြည်ပနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံအရ အသံကျယ်ကျယ် စွာကျယ်ကျယ် ခပ်မိုက်မိုက် ပြောတဲ့သူနောက်မှာ လူများတယ်။
စစ်မှန်ကောင်းမွန်တဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ ထွန်းကားပါစေသတည်း။